Rugby – «Gold Top 20»: haverina amin’ny alahady ny lalaon’ny Cosfa sy ny JSTA - ewa.mg
News - Rugby - Sport - Rugby – «Gold Top 20»: haverina amin’ny alahady ny lalaon’ny Cosfa sy ny JSTA
L’article Rugby – «Gold Top 20»: haverina amin’ny alahady ny lalaon’ny Cosfa sy ny JSTA a été récupéré chez Newsmada.
Cosfa - JSTA
Fandikana fepetra :: Tompona « Karaoke » sady « Bar » naiditra am-ponja
Miandry ny fotoam-pitsarana azy any amin’ny fonjan’ i Marofoto, any Mahajanga, ny lehilahy tompona trano fisotroana ao Maroala-Mahajanga renivohitra, omaly. Efa nahazo fampitandremana izy rehefa tra-tehaka nanokatra ny trano fisotroana sy nampisotro olona am-polony tamin’ny 13 avrily lasa teo. Namerina fanindroany indray izy, tamin’ny alin’ny 16 avrily lasa teo. Nosamborin’ireo mpitandro filaminana itsy lehilahy itsy. Voampanga ho mandika ny fepetra hamehana ara-pahasalamana sy ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina, izay noraisin’ ireo manampahefana any Boeny izy. Notazonina tao amponjakely ny tenany nandritra ny faran’ny herinandro teo. Nanapa-kevitra hampidirana azy am-ponja ny Fitsarana any an-toerana, omaly. Fanapahan-kevitra atao ohatra ho an’izay mbola minia mandika ny fepetra ara-pahasalamana no anton’io, araka ny loharanom-baovao avy any Mahajanga. L’article Fandikana fepetra :: Tompona « Karaoke » sady « Bar » naiditra am-ponja est apparu en premier sur AoRaha.
CENTRE SOCIAL ARRUPE: Ny anjara biriky ho fanarenana ny fiarahamonina
Sarotra ny mahita filaminana raha tsy eo ny fihavanana sy ny fahamarinana, hoy ny Mopera Noël Marie Cyprien Razafinandraina. Nambarany fa tsy hisy fandriam-pahalemana izany raha tsy mandala ny fihavanana sy ny fahamarinana ny mpiray monina. Handinihana ny fomba hanatanterahana izany ny “andro sosialy” izay ho tanterahina ny 16 ka hatramin’ny 18 mey 2019 eny amin’ny ivon-toerana sosialy Arrupe (centre social Arrupe) eny Faravohitra. Hetsika fanaon’ny ivon-toerana isan-taona izy ity ho fandraisana anjara amin’ny fanarenana ny fiainam-pirenena, araka ny fanazavan’ny talen’ny ivon-toerana. “Ny fampihavanana sy ny fahamarinana ho fanarenana ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana” no lohahevitra ho velambelarina mandritra ny telo andro. Hamelabelatra momba ny anjara asan’ny antokom-pinoana amin’ny andro voalohany ny avy amin’ny ny Eklesia Episkopaly Malagasy sy ny fikambanana silamo. Ao anatin’io famelabelarana io no hanaovana adi-hevitra ny fampihavanana ny olona amin’ny Andriamanitra. Ny fampihavanana ny samy mpiray firenena sy ny fananganana “firenena” ary ny fampihavanana ny olona amin’ny tontolo iainana ny famelabelaran-kevitra ho dinihina amin’ny andro faharoa sy fahatelo. Samy arahina adihevitra avokoa ireo rehetra ireo ka ho raketina ao anatin’ny gazety boky ny fehin-kevitra mivoaka mba ho tonga any amin’ny mpanapa-kevitra. Misahana ny asam-pamonjena momba ny sosialy sy ny ekolojika ao amin’ny fikambanana Jesoa ny ivon-toerana Arrupe eny Faravohitra. Hampirantiana mandritra ny “andro sosialy” ireo karazana sampan’asa iantsorohany. Ankoatra izany dia natao hanamarihana ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fikambanana Jesoa manerantany ihany koa ity hetsika ity, hoy i Mopera Noël Marie Cyprien Razafinandraina. Lynda A. Cet article CENTRE SOCIAL ARRUPE: Ny anjara biriky ho fanarenana ny fiarahamonina est apparu en premier sur déliremadagascar.
Jirama: mpanjifa 1.000.000 amin’ny 2025
Manohana ny Jirama amin’ny fanatsarana sy fanamorana ny fifandraisany amin’ny mpanjifa ny Fiaraha-miasa alemà GIZ. Anisan’ny tanjona ny fiatrehana ny Covid-19.Manodidina ny 570.000 ny mpanjifan’ny Jirama, amin’ny jiro, miparitaka any amin’ny toerana miisa 114. Miisa 194.000 kosa ny mpanjifa rano any amin’ny toerana miisa 65. Tanjona ny hampitomboana ny mpanjifa ho 1.000.000 amin’ny taona 2025 ary koa ny fampidiran-jiro miisa 100.000 amin’ny taona 2021, raha 30.000 amin’ity taona 2020 ity.Hanatrarana izany, hatsaraina ny fifandraisana amin’ny mpanjifa ka laharam-pahamehana ny hampihenana ny filaharambe eny amin’ny masoivoho. Paikady hatao ny fampiasana ny teknolojia niomerika. Mila hamoraina ny fikarakaran’ny mpanjifa ny antontan-taratasy, sns.Izay no nahatonga ny minisiteran’ny Fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana alemà (BMZ), nanohana ny Jirama amin’ny tetikasa “Fampiroboroboana ny famatsiana herinaratra azo havaozina GIZ-PERER ». Nanao sonia, omaly, ny fifanarahana teo amin’ny talen’ny tetikasa Angovo PERER ao amin’ny GIZ, Rtoa Monika Rammelt, sy ny tale jeneraly (DG) ny Jirama, Andriamanga Vonjy. Haharitra enim-bolana ny fifanarahana.Tafiditra ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny Jirama ny fanatsarana ny fitaovan-tseratsera ampiasaina ny pejy facebook, ahalalana ny vaovao ofisialin’ny Jirama rehetra. Hisy paikady vaovao hanatsarana izany. Hamafisina ny fepetra efa noraisina, mifandray amin’ny Covid-19, toy ny fakan’ny mpanjifa ny tarehimariky ny fandaniana jiro sy rano (auto-relevé). Eo koa, ny karazana fomba samihafa fandoavana ny faktiora, ny fifandraisana amin’ny internety, ny fampiasana finday, sns.Njaka AndriantefiarinesyL’article Jirama: mpanjifa 1.000.000 amin’ny 2025 a été récupéré chez Newsmada.
CEPE , BEPC , bakalorea: mari-pahaizana fa tsy diplaoma ny an’ny sekoly katolika
Hiroso amin’ny fanadinana andrana CEPE sy ny BEPC ny sekoly katolika manerana ny Nosy, ny volana aogositra ho avy izao ary ny volana septambra kosa ho an’ny fanadinana bakalorea. « Hanomezana mari-pahaizana avy amin’ny tompon’andraikitra misahana ny sekoly katolika ny fanadinana », hoy ny tomponandraikitra, mopera Ranaivoson Jules, tamin’ny onjam-peo tsy miankina iray. Tsy mahasolo ny diplaoma omen’ny fanjakana anefa ity mari-pahaizana ity fa ilaina kosa handrefesana ny fahaizan’ny mpianatra, araka ny fanazavany ihany. Efa mikarakara fanadinana sahala amin’izao hatrany ny sekoly katolika rehetra manerana ny Nosy hatramin’izay. Mampiavaka azy fotsiny manomboka izao, mitovy avokoa ny laza adina sy ny fotoana hanatanterahana ny fanadinana andrana. Manao fivoriana momba ny fanatontosana ity fanadinana ity ny mpiandraikitra ny sekoly katolika any Toliara.Momba ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE) izay natomboka ny taona 2017, nanambara ny mpiandraikitra ny sekoly katolika fa tsy mbola hanova ny fandaharam-pianarana aloha hatreto. Nanome ny soso-kevitra entina hanatsarana ny fanavaozana izy ireo ary any amin’ny tompon’andraiki-panjakana izany amin’izao fotoana izao.Anisan’ny nahazo fanakihanana avy amin’ny ray aman-dreny koa ny fanovana ny tetiandrom-pampianarana izay hoezahina ho tody amin’ny volana marsa ary mifarana volana desambra, ny taona 2023. Misavoritaka tanteraka ny ray aman-dreny satria mampitombo ny vola mivoaka ny fahalavan’ny andro fianarana, indrindra ho an’ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana.Ny sekoly miteny frantsay sy manaraka ny rafi-pampianarana frantsay ka maniry ny hampanala CEPE ny mpiadina 7ème ao aminy koa tsy maintsy miandry ny fanatanterahana ny CEPE, ny 27 aogositra.Vonjy A. L’article CEPE , BEPC , bakalorea: mari-pahaizana fa tsy diplaoma ny an’ny sekoly katolika a été récupéré chez Newsmada.
Hiarovana ny sahan-driaka ny fambolen-kazo
Namboly hazo teny amin’ny fokontany Ankadivoribe, kaominina Talata-Volonondry ny mpiasan’ny minisiteran’ny Rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana, omaly, notarihin’ny minisitra Rakotoveloma­nantsoa Voahary. Zana-kazo 4.000 no novolena ary harahi-maso akaiky miaraka amin’ny kaominina eny an-toerana ny fitomboany mba hahavelona azy ka ho tonga hazo vaventy afaka manao ny asany amin’ny fiarovana ireo sahandriaka eny an-toerana. Lohahevitra nentina nandritra ny fambolen-kazo rahateo ny hoe, miara-mientana hanajary ny sahandriaka sy hitantanana maharitra ny tahirindrano voajanahary. Nahitana karazan-kazo telo no novolena teny Talata-Volonondry dia ny “acacia”, “frêne” ary nanambo. Tan­jona ny hanatanterahana ny vinan’ny filoham-pirenena dia ny handrakotra ala an’i Ma­dagasikara, hoy hatrany ny minisitra. Miantoka tanteraka ny fisian’ny rano na an-tanety na any ambanin’ny tany ny fisian’ny hazo ka izany no nanaovana laharam-pahamehana ny fambolen-kazo.Tatiana AL’article Hiarovana ny sahan-driaka ny fambolen-kazo a été récupéré chez Newsmada.
Gestion des ressources naturelles : Les contrats de six COBA renouvelés
Des membres d’une COBA appuyée par Ambatovy. Ambatovy collabore étroitement avec les communautés de base (COBA) dans le cadre de la protection et la conservation de l’environnement autour de son site minier à Moramanga. Ainsi, des COBA vont bientôt renouveler leurs contrats de transfert de gestion de ressources naturelles : les COBA, Miaro ny Tontolo Iainana (MTI), Ezaka sy Fandrosoana (EF), Telomira, FITAMA et Ambohimanarivo Ala Maintso (AAM) pour une durée de dix ans et la COBA Velonaina de Morarano Gara pour trois ans. Ces communautés de base appuyées par Ambatovy sur divers plans vont obtenir ce renouvellement de contrat suite aux évaluations concluantes menées par la Circonscription de l’Environnement et du Développement Durable (CIREDD) Moramanga sur leurs activités, entre les mois de février et juin 2021. Ambatovy appuie la mise en place du contrat de transfert de gestion aux COBA tout en assurant leur encadrement technique dans la réalisation de la gestion proprement dite de ces ressources naturelles. En outre, le projet minier les soutient également dans le développement de leurs activités génératrices de revenus, et ce, afin de réduire leur dépendance aux ressources forestières. Recueillis par Navalona R.L’article Gestion des ressources naturelles : Les contrats de six COBA renouvelés a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fandrobana sekoly :: Nisy namaky ny oniversite Advantista
Tra-tehaka tamin’ny 24 jona lasa teo, teny Ankazomanga sy Ankorondrano, ireo olona roa voalaza fa nividy ireo entana halatra marobe norobaina tao amin’ny oniversite Advantista “Zurcher”, tany Antsoatany-Antsirabe. Hita tany amin’izy ireo ny entana sasany tamin’ireo very tao amin’io sekolim-pinoana io. Niainga tamin’ny fisamborana ireo mpiambina an’ilay oniversite, izay miisa fito ambin’ny folo, no nahazoana an’izao vokatra izao. “Solosaina miisa dimy, “lecteur Dvr” iray, “tablettes” miisa telopolo, “écouteurs” miisa telopolo ary fitaovana elektronika maro no very tamin’io fotoana io. Tamin’ny fakàna am-bavany an’ireo mpiambina miisa fito ambin’ny folo no nivoahan’ny anaran’ireo mpividy halatra monina aty an-drenivohitra. Ankoatra azy ireo dia misy olona roa ahiana ho atidoha tamin’ity halatra ity ary efa voatazona ato aminay”, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria any an-toerana. L’article Fandrobana sekoly :: Nisy namaky ny oniversite Advantista est apparu en premier sur AoRaha.